लिङ्ग परीक्षणपछिको गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा – Nepal Japan
नेपाल जापान ८ माघ २१:३६
महिला पटकपटक गर्भपतन गर्दा शारीरिक र मानसिकरूपमा निकै कमजोर भइरहेका छन् । छोराछोरी समान हुन्, समान व्यवहार गर्नुपर्छ भने पनि अझै समाजमा छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका केही परिवारका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । पटकपटकको गर्भपतनपछि समस्या भोगेकी अर्की महिलाको पीडा झन् पीडादायी छ । दुई छोरीकी आमा उनी भर्खर ३३ वर्ष लागिन् । चौध वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरेकी उनका विवाहलगत्तै तीन छोरी जन्मिए । दुई छोरी किशोरावस्थामा पुगिसके, एक छोरी बिरामी भएर बितिन् । शुरुमा उनका पतिले छोरा चाहिन्न, यिनै सन्तान हुन् भनेर राम्रै व्यवहार गरे तर केही वर्षयता उनको व्यवहार फेरियो । “पतिले सन्तान चाहियो, छोरीहरू त विवाहपछि पराइघर जान्छन् भन्न थाले, अनि म दुई पटकसम्म गर्भवती भएँ, परीक्षण गर्दा छोरी भएपछि गर्भपतन गरियो”, उनी भन्छिन्, “अर्कोपटक प्रयास गर्दा गर्भ रहन सकेन, उपचार गर्दा पनि बच्चा रोकिएन, त्यसपछि पतिले दोस्रो विवाह गरेर गए ।”
कक्षा ६ मा पढ्दापढ्दै विवाह गरेकी यिनले न पतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्, न त झगडा गर्ने हिम्मत गरिन् । उनले मुद्दा दायर गरे छोरी र उनलाई खर्च नदिने धम्की दिइरहन्छन् । “अब म सन्तान पाउन सक्दिनँ, मुद्दा मामिला गरौँ भने आफ्नो कमाइ छैन, छोरी कसरी पाल्नु, पढाउनु ? उनी कमाउँछन् र घर चलेको छ”, उनले भनिन्, “पेट पाल्नु छ । छोरीको भविष्य पनि बनाउनु छ । मेरा सपनाहरू अब रहेनन् ।”
महिला सन्तान जन्माउने मेसिनका रूपमा प्रयोग भइरहेका महसुस कतिपय महिलाले गरिरहेका छन् । छोराको आसमा महिलाको शरीरमाथि खेल्ने काम भइरहेको छ । सत्र वर्षमा विवाह गरेकी अर्की महिला अहिले शारीरिकरूपमा अस्वस्थ छिन् । तीन छोरीकी आमा उनले पनि छोराको आसमा छ पटकसम्म गर्भपतन गरिन् । छोराको आसमा गर्भपतन गरेकी उनले छोरा होइन, पाठेघर नै फाल्नुप¥यो । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि हाल पतिले पनि वास्ता गर्न छोडे । “पति भारतमा छन्, उनी घर फर्कँदैनन्, मेरो स्वास्थ्य कमजोर छ । म जोखिमपूर्ण काम गर्न पनि सक्दिनँ”, उनले पीडा पोखिन्, “अहिले अर्काको बारीको तरकारी किनेर हाटबजारमा बेच्छु, त्यहीबाट खर्च चलेको छ । छोरीहरूलाई पनि राम्रो शिक्षा दिन सकेको छैन ।”
सबैले छोरा नै खोजेमा छोरीहरू कहाँ पाइएलान् ? समाज चलाउन त छोराछोरी दुवै चाहिन्छ । “जन्माउँदा छोरा खोज्ने तर बुहारी असल र शिष्ट खोज्ने चलन छ”, अधिकारकर्मी निर्मला कडायत भन्नुहुन्छ, “सबैले परीक्षण गरेर छोरा मात्र जन्माए पछि बुहारी कहाँ पाइएलान् ? सृष्टि चलाउन त महिला नभइ हुन्न । हरेक कार्यमा महिला अर्थात् छोरी चाहिन्छ ।”
उहाँ छोरीको महत्व बुझाउन नसकेकै कारण समाजले छोरालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । “प्रजनन अधिकार महिलाको अधिकारभित्र पर्छ तर कति महिलाले अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन्, यो चिन्ताको विषय भएको छ”, कडायत भन्नुहुन्छ, “छोरीहरू आत्मनिर्भर नभएका कारण पनि महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिनका रूपमा लिने गरिएको छ ।”
टीकापुर अस्पतालले छ महिनासम्मको गर्भपतन सेवा दिन पाउने अनुमति पाएको छ तर यहाँ विशेषज्ञको सेवा नभएका कारण तीन महिनासम्मको मात्र गर्भपतन सेवा दिइने गरिएको छ । टीकापुर अस्पतालबाट महिनामा ५० जना जति महिलाले गर्भपतन सेवा लिइरहेको तथ्याङ्क छ । लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नु कानूनी अपराध हो । कुनै विशेष कारणले गर्भपतन गर्नुपरे चिकित्सकको सल्लाहमा आधिकारिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै गर्नुपर्ने कानूनी अधिकार छ । लिङ्ग छनोट गरेर गर्भपतन गर्नेहरू जिल्ला बाहिर सेवा लिन जाने वा भारत सेवा लिन जाने गरेका छन् ।
“गर्भ परीक्षणपछि गर्भपतन गर्दा आर्थिक खर्च पनि बढ्छ, महिलाको स्वास्थ्य पनि जोखिममा पर्छ”, डा रिजाल भन्नुहुन्छ, “हामी त लिङ्ग छनोटपछि आउनेलाई सेवा दिदैनौँ, उहाँहरू अन्त गएर पनि गर्भपतन गर्नुहुन्छ, हामी सम्झाउँछौँ तर मान्नुहुन्न । गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यको वाधक बन्दै गएको छ ।”